प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १७:३७
किर्तीपुर । आफ्नै सन्तानबाट कु’टाई खाने आमा ती संसारमै बिरलै हुन्छन् । र जो हुन्छन् ती सा’ह्रै अभागी पनि हुन्छन् । बुढेसकालमा छोरा बुहारीबाट माया, सम्मान र स्याहासुसार पाईएला भन्ने आशा हरेक बाबुआमाको हुन्छ । तर त्यही बुढेसकालमा आफैले जन्माएको सन्तानबाट दिनहुँ कु’टा’ई खान परिरहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा ती बाबुआमालाई कस्तो हुन्छ होला ?
उनको यो कुरा सुनेर कस्को मन नदुख्ला र ? दुई वटा छोराकी आमा हुन् जगतमाया । छोरा नहुनेलाई छोराको कत्रो रहर हुन्छ । तर जगतमायाको त दुईदुई वटा छोरा हुँदा पनि उनी दुःखी छिन् । उनी अपुताली जस्तै भएकी छिन् । कान्छो छोरा १ वर्षको नहुँदै श्रीमान बितेका रहेछन् जगतमायाको । त्यो बेलादेखि खाएको नखाई गरि उनले छोराहरुको पालन पोषण गरेको बताईन् । श्रीमान बिना आफ्ना छोराहरुलाई हुर्काउँदा निकै क’ष्ट सहनु परेको कुरा सम्झंदै भ’क्का’नीन् जगतमाया ।